Posted on November 15, 2013 November 20, 2020 by csr 1687
Mawiricheya izvo zvinogona kutungamirwa nenzeve chingave chinhu chikuru chinotevera! Iyo tekinoroji inosanganisira kukodzera varwere vane diki chip iyo inoongorora tsandanyama kufamba munzeve uye kuishandura kuita chiratidzo icho chinobva chapfuudzwa kukombuta mune wiricheya.
Vatsvagiri veGöttingen, Heidelberg naKarlsruhe vakabatana kugadzira software. Musoro wekudzidza, David Liebetanz, anotenda kuti hunyanzvi huri kunyanya kuvimbisa. Kusiyana nehunyanzvi hwazvino hunowanikwa, hahuvhiringidze kutaurirana kwepamoyo.
"[Iyi nzira] zvinopesana netekinoroji iripo iyo inoshandisa kufema kana kufamba kweziso semuenzaniso, zvinoreva kuti varwere havafanirwe kurega kushamwaridzana," akadaro.
Vadzidzi gumi, vasiri remara, vakapedza mazuva mashanu vachidzidza mashandisiro emhasuru nzeve kuti vataure neiyo software. Izvi zvinoenderana neumwe neumwe mushandisi uye inopa mhinduro zvichibva pamasaini akagamuchirwa kubva kumhasuru.
Nezuva rechishanu, vese gumi vatori vechikamu vaive vakwanisa kufambisa yavo mavhiripu kutenderedza chivakwa chikuru chechipatara.
Nyanzvi yezvepfungwa Leonie Schmalfuß akapa ruzivo rwake pachinhu ichi. "Zviri pachena kuti tiri kutaura nezve kugona izvo zvinogona kudzidziswa mune pfupi nzvimbo yenguva, sekudzidza kudzora mabhora matatu. "
Liebetanz akawedzera kuti: "Takanyatsoshamiswa neizvi nekuti hafu yevatori vechikamu vedu vakapinda muchidzidzo ichi vachiti havaikwanisa kukwenya nzeve dzavo."
[btn link = "http://www.thelocal.de/20131112/mavhiripu-nogona-kutungamirirwa-nenzeve-nzeve "color =" orenji "target =" _ isina chinhu "] Verenga Chinyorwa Chizere [/ btn]